BoostCoin စျေး - အွန်လိုင်း BOST ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BoostCoin (BOST)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BoostCoin (BOST) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BoostCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $12 584.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BoostCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BoostCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BoostCoinBOST သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.935BoostCoinBOST သို့ ယူရိုEUR€0.795BoostCoinBOST သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.714BoostCoinBOST သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.855BoostCoinBOST သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr8.41BoostCoinBOST သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.5.92BoostCoinBOST သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč20.83BoostCoinBOST သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł3.5BoostCoinBOST သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.25BoostCoinBOST သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.3BoostCoinBOST သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$20.94BoostCoinBOST သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$7.24BoostCoinBOST သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$5.12BoostCoinBOST သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹69.96BoostCoinBOST သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.157.82BoostCoinBOST သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.28BoostCoinBOST သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.41BoostCoinBOST သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿29.07BoostCoinBOST သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥6.5BoostCoinBOST သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥99.1BoostCoinBOST သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1106.46BoostCoinBOST သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦362.05BoostCoinBOST သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽68.72BoostCoinBOST သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴25.84
BoostCoinBOST သို့ BitcoinBTC0.00008 BoostCoinBOST သို့ EthereumETH0.00237 BoostCoinBOST သို့ LitecoinLTC0.0161 BoostCoinBOST သို့ DigitalCashDASH0.00978 BoostCoinBOST သို့ MoneroXMR0.00995 BoostCoinBOST သို့ NxtNXT69.9 BoostCoinBOST သို့ Ethereum ClassicETC0.133 BoostCoinBOST သို့ DogecoinDOGE263.34 BoostCoinBOST သို့ ZCashZEC0.0106 BoostCoinBOST သို့ BitsharesBTS34.34 BoostCoinBOST သို့ DigiByteDGB29.98 BoostCoinBOST သို့ RippleXRP3.09 BoostCoinBOST သို့ BitcoinDarkBTCD0.0314 BoostCoinBOST သို့ PeerCoinPPC3.01 BoostCoinBOST သို့ CraigsCoinCRAIG415.69 BoostCoinBOST သို့ BitstakeXBS38.91 BoostCoinBOST သို့ PayCoinXPY15.93 BoostCoinBOST သို့ ProsperCoinPRC114.46 BoostCoinBOST သို့ YbCoinYBC0.00049 BoostCoinBOST သို့ DarkKushDANK292.52 BoostCoinBOST သို့ GiveCoinGIVE1974.55 BoostCoinBOST သို့ KoboCoinKOBO207.85 BoostCoinBOST သို့ DarkTokenDT0.861 BoostCoinBOST သို့ CETUS CoinCETI2632.72
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 04:35:02 +0000.